Mba Hahazoana Habaka Niomerika Ahitàna Fandraisana Anjara Betsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2011 11:19 GMT
Eny fa na dia tsy nitsaha-nitombo aza ny fampiasàna ny haino aman-jerim-bahoaka tao Bolivia nandritry ny roa taona izay, dia mbola tsy ampy ny fampahafantarana feno ireo feo avy amin'ny seha-piaraha-monina rehetra ny habaka niomerika. Ny sasantsasany amin'ireny vondrona zara raha voasolotena ireny no vondrom-piaraha-monin'ny vazimba teratany, monina ao amin'ny faritra ambanivohitr'i Bolivia, ary ireo izay avy aminà fiaviana osa ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Azo apetraka ho avy amin'ny tsy fahampian'ny fahafaha-miditra aterineto any amin'ireny faritra ireny ny ampahany amin'ny tsy fahitàna an-dry zareo, kanefa mety hahatsapàna ihany koa ny tsy fisian'ny fifandrohizana amin'ny vondrom-piarahamonina niomerika Boliviana midadasika be ao.
Kanefa, izany tsy midika fa ireo feo ireo dia tsy hiova mihitsy mandritra ity firoboroboan'ny fandraisana anjara niomerika ity, satria maro dia maro ny olona avy aminà fiaviana samihafa no mandray anjara aminà fampiofanana na fianarana tsotra amin'ny anaran'ny tenany. Kanefa ity fandraisana anjara ity dia mety hivelatra sy ho lalindalina kokoa.
Miaraka main'ny fanohanan'ny HIVOS sy IBIS, ny Rising Voices dia mikarakara fiaraha-mientana in-telo miantoana ao Cochabamba, Bolivia ny 12-14 Desambra miaraka amin'ireo feo izay vao nisondrotra sy ireo mpamorona ny media niomerika hafa. Ny tanjon'ny fivondronan'ny “Conectándonos” (Connecting) dia mba hitondra fanohanana sy fampiofanana mpandray anjara miisa 35 avy amin'ireny vondrom-piaraha-monina zara raha voasolo tena ireny ary ireo mpiara-miasa akaiky amin'ireo vondrona ireo mba hahafantarana ny fomba azony irotsahana hiantohana fa ho toerana hiaraha-mifanotrona ny haba dizitaly Boliviana miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny seha-piaraha-monina rehetra. Ny mARTadero no ho tranonkalan'ilay fivondronana, ho habaky ny zava-kanto sy ny kolontsaina any Atsimon'i Cochabamba.
Tafiditra ao anatin'ny ho endriky ny fampivondronana ny fizaràna fanadihadiana tranganà zava-misy marina momba ny faritra farany takatry ny tetikasam-panentanana amin'ny haino aman-jerin'olon-tsotra manerana ny firenena sy manerana izao tontolo izao, toy ny atrikasa anaovana fampiharana mivantana sy fampidirana ny fampiofanana miendrika “Bar-Camp”. Farany, dia hisy ihany koa ny hetsika anaty vondrona madinika izay hamelabelaran'ireo mpandray anjara ny heviny manokana amin'ny fomba hahatonga azy ireo ho fantsona hitondra famporisihana ny hafa hanomboka hampiasa ireo fitaovana efa misy ireo any amin'ny fiaraha-monina misy azy avy.
Fanampin'izany, dia hisy hetsika ihany koa misokatra ho an'ny daholobe hatao ny faha 13-n'ny volana Desambra hiresahana io filàna manentsina ny banga eo amin'ny elanelana misy amin'ny fandraisana anjara amin'ny haino aman-jerin'olon-tsotra any anatin'ireny fiaraha-monina zara raha voasolo tena ireny. Araho ao amin'ny Twitter amin'ny @conectandonosBO [es] ary mba tsidio azafady ny tranokalan'ny Conectándonos [es] mandritry ny fizotran'ny telo andron'ny hetsika. Hamoaka lahatsoratra voadika amin'ny fiteny anglisy ao amin'ny bilaogin'ny Rising Voices izahay.
16 ora izayBahrain